कोरोनाबाट बेलायतमा पूर्व गोरखाहरु किन बढी संक्रमित ? | We Nepali
नेपालको समय: १५:३१ | UK Time: 10:46
कोरोनाबाट बेलायतमा पूर्व गोरखाहरु किन बढी संक्रमित ?
२०७७ वैशाख २४ गते ७:२८
कोरोना भाइरसबाट सिर्जित नयाँ रोग कोभिड १९ बाट अहिले विश्व आक्रान्त छ । चीनबाट शुरु भएको यो रोगले अहिले महामारीको रुप लिएको छ र अहिले यसको संक्रमण विश्वभर फैलिसकेको छ । एक तथ्यांकअनुसार यस रोगले हालसम्म छुन बाँकी विश्वमा १५ वटा देश छन् । पछिल्लो समयमा युरोप र अमेरिका यो महामारीको केन्द्र बनेका छन् । ती देशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरु पनि यो रोगको शिकार भएका छन् । हालसम्मको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी नेपालीहरु यस महाव्याधिको शिकार बनेको मुलुक बेलायत हो । यहाँ यो पंक्ति तयार पार्दासम्म ४० जना नेपालीको यस रोगबाट मृत्यु भएको नेपाली दुताबासबाट पुष्टि भइसकेको छ । यो संख्या अझै धेरै हुनसक्छ । यसरी मृत्यु हुनेहरुमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी भूतपूर्व गोरखा सैनिकहरु र उनका परिवार छन् ।
के कारण गोरखा भूतपूर्व सैनिक परिवार यस रोगबाट सबैभन्दा प्रभावित बने त
यस रोगबाट मृत्यु हुनेहरुमा गोरखाहरुको संख्या सबैभन्दा बढी देखिनुको पहिलो कारण उनीहरुको जनसंख्या हो । बेलायतमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुमा सबैभन्दा बढी जनसंख्या पूर्व गोरखाहरुकै छ । बेलायतको सबैभन्दा पछिल्लो सन् २०११ को जनगणनाले नेपालीहरुको जनसंख्या करिब ६० हजार देखाएको थियो । तथापि धेरै नेपालीहरु त्यतिबेला अवैधानिक रुपले बसोबास गरिरहेको र एउटै घरमा सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा बढी संख्यामा बसोबास गरिरहेकाले कतिपयले जनसंख्यामा सहभागिता नै जनाएनन् । नेपाली समुदायको अनुमानमा बेलायतभर करिब १ लाख ५० हजार जनसंख्या नेपाली मूलका नेपालीको छ भन्ने छ । जसमा कम्तीमा ७० प्रतिशत हिस्सा गोरखा भूतपूर्व समुदायको भएको मानिन्छ । यसरी जसको ठूलो जनसंख्या छ उनीहरुमा रोगको प्रभाव ज्यादा देखिनु स्वाभाविक नै भयो ।
इंग्ल्याण्ड र वेल्समा कोभिड १९ बाट ५५ वर्ष माथिका मानिसहरु सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको यहाँको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रारम्भिक आँकडा छ । युकेका भूतपूर्व गोरखाहरुको ठूलो संख्या यस उमेर समूहमा पर्छन् । खासगरी बेलायत सरकारको सन् २००८ को निर्णयपछि बेलायत आउने भूतपूर्व गोरखाहरु त अहिले यहाँको सेवा निवृत्त हुने उमेर (६५ वर्षभन्दा बढी) समूहमा पर्दछन् । ६५ वर्ष माथिको उमेर समूहका भूतपूर्व गोरखा र उनीहरुको परिवारको संख्या यहाँ करिब १५ देखि २० हजार रहेको अनुमान गरिएको छ । बेलायतमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका मानिसहरुमध्ये ७० प्रतिशत हिस्सा ७५ वर्ष माथिको उमेर समूहको छ । त्यसैले यो रोगले बयोवृद्धावस्थाको जनसंख्यालाई नराम्ररी असर पार्दा गोरखा भूतपूर्व सैनिक र उनीहरुको परिवार पनि पर्नु सामान्य नै हो ।
बुढ्यौलीसँगै गाँसिएर आउने अर्को समस्या हो कमजोर स्वास्थ्यावस्था । कोभिड १९ ले पहिल्यै विभिन्न स्वास्थ्य समस्या भएका मानिसहरुलाई नराम्ररी थलाउने गरेको देखाएको छ । बेलायतको तथ्यांकअनुसार कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेमा सबैभन्दा बढी संख्या पहिल्यै मुटुको समस्या भएकाहरुको छ । त्यसपछि डिमेन्सिया वा अल्जाइमरजस्ता रोगबाट पहिल्यै ग्रसितहरु छन् । पहिले कुनै पनि स्वास्थ्य समस्या नभएकाहरु कमै मात्र कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बितेका छन् । धेरैजसो बुढ्यौली अवस्थाका गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरु पहिल्यै कुनै न कुनै स्वास्थ्य समस्याबाट ग्रसित छन् । मधुमेह, उच्चरक्तचाप, कोलेस्ट्रोल, बाथ, दम जस्ता समस्या उनीहरुका साझा समस्या हुन् । त्यसैले उनीहरु कोरोना संक्रमणको जोखिममा पर्ने नै भए ।
बयोवृद्धावस्थाका गोरखाहरु कोरोनाको संक्रमणमा बढी पर्नुको अर्को कारण हुनसक्छ–भाषाको ज्ञान र स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको अभाव । बेलायतको जनस्वास्थ्य इंग्ल्याण्ड लगायतका निकायहरुले तयार पारेका कोरोना भाइरसबाट बच्न अपनाउनुपर्ने उपायहरु समेटिएका सामग्रीहरु सबै अंग्रेजीमै छन् । मूलप्रवाहका सञ्चारमाध्यमहरु सबै अंगे्रजी भाषामै प्रकाशन प्रसारण हुने गर्छन् । जनस्वास्थ्यका विज्ञ, चिकित्सकहरु प्रायको अन्तरवार्ताहरु अंग्रेजीमै छन् । औँलामा गन्न सकिने स्थानीय काउन्सिलहरुले नेपाली भाषामा ती उपायहरु अनुवाद गरेका थिए तर अफसोच ती सामग्रीहरु घरघरमा पु¥याउन नपाउँदै बेलायतमा लक डाउन शुरु भइहाल्यो । लक्षीत परिवारसम्म पु¥याउनै नपाइकन । यस्तै, भाषाको अज्ञानताका कारण कोरोना संक्रमणको लक्षण देखिँदा पनि धेरै गोरखाहरु सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थामा फोन नगरी घरमै बस्न बाध्य भए । आफूमा कोरोनाको लक्षण देखिएको छिमेकी वा आफन्तलाई भन्दा कतै छिःछीः दुरदुर पो भइने हो कि भन्ने चिन्ता यहाँ वृद्धावस्थाका गोरखाहरुलाई मात्र होइन युवा, अधबैँसे नेपालीहरुमा पनि व्याप्त छ । त्यसैले समयमै उपचार नपाउँदा उनीहरु बढी प्रभावित भएका पनि हुन सक्छन् ।
बेलायत सरकारले कोरोना संक्रमणबाट बच्न एकान्तबास (आइसोलेसन) र सामाजिक दुरी (सोसल डिस्ट्यान्सिङ) को अवधारणा ल्याएको छ । यो कसरी र को–कोसित पालना गर्ने भन्ने बारेमा वृद्धावस्थाका गोरखा भूतपूर्व सैनिक र तिनको परिवारलाई बुझाउन नसकिएको देखिन्छ । समाचार संकलनका क्रममा कोरोना संक्रमणका कारण दिवंगत भएका एक गोरखा भूतपूर्व सैनिकको बारेमा बुझ्दा उनको परिवारका सबै सदस्यहरु स्वास्थ्य सेवा र केयर होममा काम गर्दारहेछन् । परिवारका सदस्यहरु कम उमेरका र दैनिक भाइरस संक्रमितहरुसित काम गर्दागर्दा उनीहरुमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी हुने नै भयो । उनीहरुलाई कोरोना संक्रमण जोखिमपूर्ण भएन तर पहिल्यै विभिन्न रोगको औषधि खानपर्ने र उमेर पनि पाको भइसकेका आमाबाबाका लागि यो रोग खतरापूर्ण थियो । उनीहरुले आफ्नै आमाबाबासित घरभित्र सामाजिक दुरी र एकान्तबासको नियम पालना नगर्दा दुवैजना भाइरस संक्रमणमा परे । जसमध्ये बाबाको निधन भयो भने आमा उपचारपछि घर फर्किन् । कोरोनाबाट बच्न आफू घरबाहिर नजाने मात्र होइन आफ्नै घरका सदस्यहरु जो घर बाहिर आउजाउ गर्छन् भने उनीहरुसित पनि अलग्गै रहनुपर्छ ।
वयोवृद्ध अवस्थाबाहेक काम गर्ने उमेर समूहका धेरै पूर्व गोरखा परिवार र नेपालीहरु यहाँ अत्यावश्यक सेवाका क्षेत्रमा काम गर्छन् । अस्पताल, केयर होम, ग्रोसरी, जस्ता बन्द गर्न नमिल्ने क्षेत्रमा काम गर्ने उनीहरुले कार्यस्थलमा अरु मानिससित सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ । आवतजावतका लागि सार्वजनिक सवारीसाधनहरु चलाउनु पर्ने हुन्छ । तर अहिले बेलायतमा बितेका नेपालीहरुको संख्या र अत्यावश्यक सेवामा काम गर्ने नेपालीहरुको हिसाको अनुपात केलाउँदा नेपाली समुदायमा भएको क्षतिलाई बढी भन्न मिल्दैन । उदाहरणका लागि बेलायतको स्वास्थ्य सेवामा काम गर्ने नेपालीहरुको संख्या बाक्लो छ । अहिलेसम्म १०० भन्दा बढी यस सेवामा कार्यरत कर्मचारी कोरोनाबाट बितिसकेका छन् । सौभाग्य नै मान्नुपर्छ जसमा नेपालीहरु परेका छैनन् ।
बेलायतमा कोरोना संक्रमणबाट अफ्रिकन र एसिएन मूलका मानिसहरु उनीहरुको जनसंख्याको अनुपातभन्दा धेरै प्रभावित भएको पाइएको छ । यसको पछि के कारण हुन सक्छन् भन्ने बारेमा सर्वत्र चासो छ र बेलायत सरकारले पनि अनुसन्धान गर्ने वचन दिइसकेको छ । त्यस्तो अनुसन्धानबाट निस्किने कारणहरु र नतीजाहरु नेपाली समुदायका लागि पनि कामयावी हुनेछन् ।
अन्त्यमा यदि समयमै भूतपूर्व गोरखाहरुलाई कोरोनाबाट बच्ने उपायहरु उनीहरुले बुझ्ने भाषा, सरल शैली र प्रयोगात्मक हिसाबले देखाउन, बुझाउन र पु¥याउन सकिएको भए केही हदसम्म उनीहरुलाई बचाउन सकिन्थ्यो । तर धेरै गोरखाहरु पहिल्यै विभिन्न रोगबाट पीडित, उमेर पनि निक्कै पाको भइसकेको अवस्थामा रहेकाले भाइरसबाट हुने प्रभाव उल्लेख्य रुपमा कम गराउने ठाउँ भने त्यति देखिँदैन । यसैगरी, काम गर्ने उमेर समूहका गोरखा परिवार र समग्र नेपालीहरुलाई हेर्ने हो भने उनीहरुले काम गर्ने क्षेत्रमा रहेको जोखिमअनुसार कोरोनाले धेरै क्षति पुर्याएको भन्न मिल्दैन ।
(यस लेखको सम्पादित र छोट्याइएको रुप २४ वैशाख २०७७ को गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित भएको थियो)